Xarakada Alshabab oo qabsatay Magaalo Istaraatiiji ah Oo dhacda Bartamaha soomaaliya | Xaqiiqonews
Xarakada Alshabab oo qabsatay Magaalo Istaraatiiji ah Oo dhacda Bartamaha soomaaliya
Xarakada Alshabaab ayaa qabsaday magaalada ceelbuur subaxnimadii isniinta magaaladani istaraatiijiga ah ayaa dhacda gobolada dhexe ee Soomaaliya .
ka dib markii ay ciidamada Itoobiya isaga baxeen magaalada ayaa waxaa guadaha u soo galay magaalada rag ka tirsan alshabab mana jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda iyo ciidamada Amisom oo ku aadan arintani.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay shabakadda xaqiiqonews in ciidamada Itoobiya ee ku suganaa magaalada ay jareen isgaarsiintii ka hor inta aysan ka bixin magaalada si buuxda.
wararka ayaa intaa ku daray in ciidamada ka baxay magaalada ay aadeen dhinaca magaalada Dhusamarab oo 50 km, u jirta halkaas oo ay ciidamo Itoobiyaan kale joogaan.
Ciidamada Itoobiya ayaa la wareegay gacan ku heynta ceelbuur bishii / March 2014 , laakiin dhaqdhaqaaqa alshabab ayaa ku soo rogay cuna-qabatayn magaalada tan iyo markii ay soo galeen ciidamada Itoobiya, waxa kale oo ay alshabab ciidmada ku qaadi jireen weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah .
dhawaan ayey ciidamada itoobiye iska baxeen magaalooyin kale oo dhaca koonfurta soomaaliya sanadkii la soo dhaafay lamana oga waxa ku qasbay ciidmada itoobiya in ay iskaga baxaan magaalada
Guusha X S N M X M D
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa loo doortay madaxweynaha Soomaaliya doorasha ka dhacday teendhada Afisyooni ee magaalada...